Polyester Polyester Fiber Acoustic Panel ၏လျှောက်လွှာ - သတင်း - Suzhou Soundbetter Architectural Materials Co., Ltd.
အိမ် > သတင်း > စက်မှုသတင်း
Polyester Polyester Fiber Acoustic Panel ၏အသုံးချမှု
လျှောက်လွှာPolyester ဖိုက်ဘာ ကော့စတစ် ပန်နယ်
အသံစုပ်သည့်ချည်၏သိပ်သည်းဆသည် ကွဲပြားသည်၊ acoustic နိယာမအရ၊ အသံစုပ်သည့်ချည်၏သိပ်သည်းဆ မြင့်မားလေ၊ ကြိမ်နှုန်းနိမ့်ပါးမှုကို စုပ်ယူနိုင်မှုအားကောင်းလေဖြစ်သော်လည်း သိပ်သည်းမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း၌ စုပ်ယူနိုင်စွမ်း၊ ကြိမ်နှုန်းနည်းသော ကန့်သတ်ချက်သို့ ရောက်သည်။ သင့်သက်ဆိုင်ရာနေရာများ၏ အသံပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ သင့်လျော်သောသိပ်သည်းဆရှိသော အသံစုပ်နိုင်သောချည်ကို ရွေးချယ်ပါ။
အသံစုပ်ယူခြင်းနှင့် အသံစုပ်ယူနိုင်သော ချည်ကို အပူဖိနှောင်ခြင်းမှတစ်ဆင့် အရည်အသွေးမြင့် polyester အမျှင်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် ဖန်ဖိုက်ဘာ၊ ရော့ခ်သိုးမွှေးနှင့် ရေမြှုပ်ကဲ့သို့သော ရိုးရာအန္တရာယ်ရှိသော အသံစုပ်ယူမှုနှင့် အသံစုပ်ယူသည့်ပစ္စည်းများကို အစားထိုးသည့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မည့် ပစ္စည်းအသစ်ဖြစ်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲ လူ၏အရေပြားနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်ပြီး အရောင်ကင်းပြီး အနံ့ကင်းကာ ညစ်ညမ်းစေသော အရာများကို မထုတ်လွှတ်ပါ။ ၎င်းသည် သဘာဝနှင့် အနီးစပ်ဆုံး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသံစုပ်ယူနိုင်သော ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
အတွင်းပိုင်းအပိုင်း သို့မဟုတ် နံရံတွင် အသံစုပ်ယူမှုနှင့် အသံလျှပ်ကာအဖြစ် အသုံးပြုသည့်အခါ၊ ၎င်းသည် ဖန်ဖိုက်ဘာထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုနှင့် အသံစုပ်ယူမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီး 100% ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်း၏ မီးခိုးသိပ်သည်းဆနှင့် အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့များသည် အမျိုးသား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး စံနှုန်းများထက် နည်းပါးသည်။
အသုံးချမှုနယ်ပယ်- ကွန်ပျူတာခန်းများ၊ ကပွဲခန်းမများ၊ ဘက်စုံသုံးခန်းမများ၊ ပြဇာတ်ရုံများ၊ အသံသွင်းစတူဒီယိုများ၊ စတူဒီယိုခန်းများ၊ စန္ဒယားခန်းများ၊ စက်ယန္တရားခန်းများ၊ အစည်းအဝေးခန်းများ၊ အားကစားရုံများ၊ ပြပွဲခန်းမများ၊ အကခန်းမများ၊ KTV ခန်းများနှင့် မိသားစုအသံ insulation နှင့် ဆူညံသံလျှော့ချရေးတို့တွင် အသုံးပြုသည်။ .
အင်္ဂါရပ်များနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများPolyester ဖိုက်ဘာ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ အကန့်များ
1. ပစ္စည်းသည် ကောင်းမွန်ပြီး၊ အရသာမရှိသော၊ formaldehyde ကဲ့သို့သော အန္တရာယ်ရှိသော အရာများကို မထုတ်လွှတ်ဘဲ၊ 100% ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။1။ ပစ္စည်းသည် ကောင်းမွန်ပြီး အရသာမရှိသော၊ formaldehyde ကဲ့သို့သော အန္တရာယ်ရှိသော အရာများကို မထုတ်လွှတ်ဘဲ 100% ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
2. ၎င်းကို ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ၊ ရိုးရှင်းသော တပ်ဆင်မှု၊ အဆင်ပြေသော ဆောက်လုပ်ရေး၊ ချွေတာပြီး လက်တွေ့တွင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
3. တာရှည်ခံသော ဖိုင်ဘာသည် ခိုင်ခံ့ပြီး ကွဲရန်မလွယ်ကူပါ။ ပုပ်ခြင်း၊ အမျိုးမျိုးသောသေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများ၊ မှိုများ၊ အက်ဆစ်များ၊ ဆားများနှင့် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များ၏ချေးကို တွန်းလှန်မည်မဟုတ်ပါ။
4. မီးမမှီသောစွမ်းဆောင်ရည်သည် အမျိုးသားအတွင်းပိုင်းအလှဆင်မှုစံနှုန်း၏ B1 အဆင့်သို့ရောက်ရှိသွားပါသည်။
5. အောက်ဆီဂျင်အညွှန်းကိန်းသည် A အဆင့်သို့ရောက်ရှိသည်။
6. မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ၊ ဆူညံသံလျှော့ချရေးကိန်း 0.79 သို့ရောက်ရှိ; အသံစုပ်ယူမှုကိန်းဂဏန်းသည် NRC=0.81 သို့ရောက်ရှိသည်။
7. ကောင်းမွန်သောရေစိုခံနှင့် breathable စွမ်းဆောင်ရည်;
8. 100% ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။
လွန်ခဲ့သော:Fabric Acoustic Panels တပ်ဆင်နည်း
နောက်တစ်ခု:Acoustic Panels ကိုရွေးချယ်သည့်အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်